Emihle nemibi ezikhanyisayo lesikweletu kuphela credit card
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Emihle nemibi ezikhanyisayo lesikweletu kuphela credit card
EJapane, kukhona ukuthambekela ukuthi udumo ezikhanyisayo ngokwalo osendlini. Abantu abaningi isithombe ezikhanyisayo credit izikweletu alinganayo, isibonelo, e-United States ngokuvamile ezikhanyisayo credit Ekhuluma settlement ikhadi, ngoba Japan kukhona umuzwa ukumelana abathengi, kukhona isimo okungahambisani kalula ugxile.
ilungelo lokupha ngokuvamile ngenxa izinzuzo
, nenkampani yakho yekhadi lesikweletu ikhipha ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi, futhi inikeza eziningi izinzuzo ababhalisile, sisebenzela ukusakaza. Ekuqaphela nsizwa, ukhiphe ikhadi esebenzisa uhlamvu izithombe kanye umdlalo Popular ngobudlova. Lawa makhadi noma ube design eliyinkimbinkimbi, izinto ezikhethekile kuphela lapho ikhadi ikhishwa noma etholakalayo, sekwande kakhulu phakathi abathanda.
Ngaphezu kwalokho, i-credit ezikhanyisayo credit card kuphela, uye ifakwe eziningi izinzuzo ukuze basakaze umhlinzeki. Ngokwesibonelo, siye enwetshiwe isilinganiso nokwehlisa amaphuzu ukuze uthole isikhathi ukusetshenziswa ikhadi. Jwayelekile iphuzu ukunciphisa izinga 0. Emelene 5%, kukhona ikhadi-1% kwaphela izinga ukunciphisa ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi. Kuyoba ukuthi eziningi izinga zokunciphisa. Ngaphezu kwalokho, kuye kwaba impatho ekhethekile ngokuya Imali yonyaka, eshibhile Imali yonyaka anjalo esikhathini ikhadi evamile, noma zimisiwe khulula.
Kuyinto ke kuze kube iningi labo are ohambisana travel kwezilwandle ingozi umshwalense kanye yomshuwalense yezitolo, okuyinto ezivelayo, ezifana ikhadi okunethezeka. Inkampani credit, futhi nginethemba lokuthi uyoba umphakathi Ikhredithi uhlobo American, sisebenzela nizuza amakhasimende nifaka eziningi izinzuzo ezinjalo.
kusimo kuyinto Imali isithakazelo kuphezulu bathambekele ukhombe ribonucleic ozinikele credit card
ungaphakathi udumo ezikhanyisayo bathambekele demerit itholakala ngendlela yalo. Isibonelo, ukuthi ngoba lemali kuphela nyangazonke ezithile zemali ezidonswe, mancane amathuba okuthi abe nomuzwa isikweletu. Kungase kuholele semali yezitolo kuka ukwazi ukukhokha inani, lapho izikweletu akuyona encishisiwe ngisho nangemva kuze kube, avame ukuba yokuthi nje zithathwe kuphela isithakazelo eqinisweni kwezinhloso zenzuzo.
Nakaniwa, kukhona icala lokho kuwa kwenziwa ezikweletini ambalwa ezikhanyisayo credit, ukusebenzisa ngokuqapha. Iningi nenkampani yakho yekhadi, ubulokhu-Inthanethi amasevisi kungabonwa ukusetshenziswa umlando siqu amakhasimende, kubalulekile ukuya ukusetshenziswa okuhle ngenkathi kokuhlola ubhontshisi.
ngoba ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi wukuthi kukhona eziningi izinzuzo kanye namasevisi kokusiza, kodwa ekhangayo, ngoba kukhona zikweletu, kumelwe siqhubeke ukukhokha inzalo. Ngokwesibonelo, lapho sithenga izinto iqoqo ukuze 90,000 yen ngenyanga 10,000 yen ukubuyiswa kwemali of ezikhanyisayo credit, uzokhokha phezu 10 izikhathi Kubandakanya isithakazelo, isamba isithakazelo kuyoba ngaphezu 6000 yen. Izitalimende ezintathu 90,000 yen, isithakazelo kakhulu ngendlela 2200 yen, ozozalwa mayelana kathathu umehluko.
inkomba | ezikhanyisayo credit Uma ingozi
igunya kunikezwa ukukhokha inzalo kangangokuthi iyihlane, kukhona indlela obekwe ukwandisa inani ukubuyiswa kwemali enyangeni. Ngokwesibonelo, uma uzibekela ukuba 200,000 manje 300,000 manje, ukuba umzuzu evamile yezitolo, cishe akashintshi ne-credit card the next 1 inyanga isikhathi sokukhokha.
Ngaphezu kwalokho, kweziningi ezikhanyisayo credit ozinikele credit card, ungaba e isamba semali esele ku-inthanethi ye-inqubo.
inkomba | buyiselo ngobuningi, yinhlama-sum nokukhokhwa ezikhanyisayo credit kungenzeka?